ကမ်ဘာ့အကွီးမားဆုံးဆညျကွီးပေါငျး ၅၈,၇၀၀ အနကျ အမြားစုမှာ ယိုယှငျးပကျြစီးလာနပွေီး ဆညျကြိုးမညျဆိုပါက ကမ်ဘာ့အကွီးမားဆုံး ခြောကျကွီးဖွဈသော Grand Canyon ကို ၂ ကွိမျခနျ့အထိ ရအေပွညျ့ဖွညျ့ပေးနိုငျမညျ့ပမာဏဖွဈကွောငျး သတိပေး - Property News in Myanmar | iMyanmarHouse.com
ကမ်ဘာ့အကွီးမားဆုံးဆညျကွီးပေါငျး ၅၈,၇၀၀ အနကျ အမြားစုမှာ ယိုယှငျးပကျြစီးလာနပွေီး ဆညျကြိုးမညျဆိုပါက ကမ်ဘာ့အကွီးမားဆုံး ခြောကျကွီးဖွဈသော Grand Canyon ကို ၂ ကွိမျခနျ့အထိ ရအေပွညျ့ဖွညျ့ပေးနိုငျမညျ့ပမာဏဖွဈကွောငျး သတိပေး
25 Jan 2021 11:22 am တှငျ တငျခဲ့သညျ
1087 ကွိမျ ကွညျ့ရှု့ပွီး
အမရေိကနျပွညျထောငျစု၊ အရီဇိုးနားပွညျနယျရှိ ဟူးဗားဆညျ (Hoover Dam) မှသညျ ဂြျောဂြီယာရှိ အငျဂူးရီဆညျ (Inguri Dam) အထိသော ကမ်ဘာ့အကြျောကွားဆုံး ဆညျကွီးမြား၏ အမြားစုမှာ ပွိုကပြကျြစီးတော့မညျ့ အန်တရာယျရှိနကွေောငျး အစီရငျခံစာတဈခုတှငျ သတိပေးထားသညျ။
ကမ်ဘာတဈဝနျးရှိ အကွီးမားဆုံးဆညျကွီးပေါငျး ၅၈,၇၀၀ အနကျ အမြားစုမှာ ၁၉၃၀ မှ ၁၉၇၀ ပွညျ့လှနျကာလမြားအကွား တညျဆောကျခဲ့ခွငျးဖွဈရာ သကျတမျးအားဖွငျ့ နှဈပေါငျး ၅၀ မှ ၇၀ ကွားရှိနပွေီဖွဈသညျ။
အမြားစုမှာ နှဈ ၅၀ မှ ၁၀၀ ကွား သကျတမျးခံနိုငျစရေနျသာ တညျဆောကျထားခွငျးဖွဈရာ ယခုအခါ ၎င်းငျးတို့သညျ သကျတမျးကုနျဆုံးတော့မညျအခြိနျ ခဉျြးကပျလာပွီ ဖွဈသညျ။
အဆိုပါ ဆညျကွီးမြားသာ ကြိုးကမြညျဆိုပါက ရေ ၈,၃၀၀ ကုဗကီလိုမီတာ ထုတျလှတျမညျဖွဈရာ အမရေိကနျရှိ ကမ်ဘာကြျော Grand Canyon ခြောကျကွီးကို ၂ ကွိမျခနျ့ ရဖွေညျ့ပေးနိုငျမညျ့ ပမာဏလညျး ဖွဈသညျ။
(Grand Canyon ခြောကျကွီးသညျ အမရေိကနျပွညျထောငျစု၊ အရီဇိုးနားပွညျနယျတှငျ တညျရှိသညျ။ အလြား ၂၇၇ မိုငျ၊ အနံ ပြှမျးမြှ ၁၀ မိုငျနှငျ့ အနကျ ပြှမျးမြှ ၁ မိုငျရှိသညျ့ ခြောကျကွီးဖွဈကာ ခြောကျအောကျခွတှေငျ ကျောလိုရာဒိုမွဈက စီးဆငျးနသေညျ။)
ယခုတှရှေိ့ခကျြသညျ နိုငျငံတကာမှ မူဝါဒခမြှတျသူမြားအနဖွေငျ့ အိုမငျးလာသော ဆညျမြားကို မညျသို့လုပျဆောငျမညျအား ဆုံးဖွတျနိုငျရနျ အထောကျအကူပွုမညျဟု သုတသေီတို့က မြှျောလငျ့သညျ။
ယခုလလေ့ာမှုကို ကုလသမဂ်ဂ ရေ၊ သဘာဝပတျဝနျးကငျြနှငျ့ ကနျြးမာရေး တက်ကသိုလျအငျစတီကြု (UNU-INWEH) မှ သုတသေနပညာရှငျမြားက ပွုလုပျခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး ကမ်ဘာတဝနျးရှိ အကွီးမားဆုံး ဆညျကွီးမြား၏ သကျတမျးနှငျ့ အခွအေနမြေားကို လလေ့ာခဲ့ကွသညျ။
သကျတမျး နှဈ ၅၀ မှ ၁၀၀ ကွား ခံနိုငျရညျရှိအောငျသာ ဒီဇိုငျးထုတျဆောကျလုပျခဲ့ကွခွငျးဖွဈရာ ယခုအခါ သကျတမျးအိုမငျးလာမှု လက်ခဏာမြား စတငျပွသလာဖှယျရှိနကွေောငျး သုတသေီတို့က ပွောသညျ။
UNU-INWEH မှ အကွီးတနျး သုတသေနပညာရှငျ ၊ ယခုလလေ့ာမှုကို ဦးဆောငျသူ ဒူမငျဒါ ပရဲရား (Duminda Perera) က “သကျတမျးရငျ့လာတဲ့ ဆညျတှရေဲ့ ယနပွေ့ဿနာဟာ နိုငျငံအနညျးငယျသာ ရငျဆိုငျနကွေရတာလို့ ဆိုနိုငျပါတယျ။ ကမ်ဘာ့အကွီးမားဆုံး ဆညျကွီးတှရေဲ့ ၉၃ ရာခိုငျနှုနျးဟာ နိုငျငံ ၂၅ နိုငျငံမှာပဲ ရှိတာဖွဈပါတယျ”ဟု ပွောကွားသညျ။
“၂၀ ရာစုအလယျပိုငျးမှာ ကွီးမားတဲ့ဆညျကွီးတှဆေောကျလုပျမှု မွငျ့တကျခဲ့ပွီး ၁၉၆၀၊ ၇၀ ပွညျ့လှနျကာလတှမှော အထှတျအထိပျကို ရောကျခဲ့ပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့က အာရှ၊ ဥရောပနဲ့ မွောကျအမရေိကတိုကျတှမှောပါ။ အာဖရိကမှာ ဆညျဆောကျလုပျမှု အထှတျအထိပျ ရောကျခဲ့တဲ့ ကာလကတော့ ၁၉၈၀ ပွညျ့လှနျကာလတှေ ဖွဈပါတယျ”ဟု ပရဲရားက ဆကျလကျပွောကွားသညျ။
အဆိုပါ ကာလနောကျပိုငျးတှငျ ဆညျအသဈဆောကျလုပျမှု ပမာဏ ဆကျတိုကျကဆြငျးလာခဲ့သညျ။
ကမ်ဘာတဈဝနျးရှိ ဆညျမြားအတှငျး ရကေုဗ ကီလိုမီတာ ၇၀၀၀ မှ ၈၃၀၀ ကွား သိုလှောငျထားသညျဟု ခနျ့မှနျးရသညျ။
ကမ်ဘာ့ရာသီဥတုပွောငျးလဲမှုကလညျး ဆညျမြားအိုမငျးမှုဖွဈစဉျကို ပိုမိုမွနျဆနျမှုဖွဈစနေိုငျကွောငျး ၎င်းငျးတို့အဖှဲ့က ယူဆသညျ။
UNU-INWEH ၏ ဒါရိုကျတာ ဗလာဒီမီယာ စမကျချတငျ (Vladimir Smakhtin) က “ယခု အစီရငျခံစာဟာ သကျတမျးရငျ့ အိုမငျးနတေဲ့ ရသေိုလှောငျမှု အခွခေံအဆောကျအအုံတှရေဲ့ တစထကျတစ ဆိုးရှားလာနတေဲ့ ပွဿနာကို တဈကမ်ဘာလုံး အာရုံစိုကျမိစဖေို့ ရညျရှယျပါတယျ။ ရဘေေးအန်တရာယျရဲ့ ခွိမျးခွောကျမှု ဖွဈပျေါလာနတေဲ့အပျေါ နိုငျငံတကာက ကိုငျတှယျဖွရှေငျးရနျ လှုံ့ဆျောပေးနိုငျဖို့ ရညျရှယျတာ ဖွဈပါတယျ” ဟု ပွောကွားသညျ။
1. Kariba ဆညျ၊ ဇငျဘာဘှနေိုငျငံ - ရသေိုလှောငျမှု ၁၈၅ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
2. Bratsk ဆညျ၊ ရုရှား - ရသေိုလှောငျမှု ၁၆၉ ဒသမ ၂၇ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
3. Akosombo ဆညျ၊ ဂါနာ - ရသေိုလှောငျမှု ၁၄၄ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
4. Daniel Johnson ဆညျ၊ ကနဒေါ - ရသေိုလှောငျမှု ၁၃၉ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
5. Guri ဆညျ၊ ဗငျနီဇှဲလား - ရသေိုလှောငျမှု ၁၃၅ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
6. Aswan High ဆညျ၊ အီဂဈြ - ရသေိုလှောငျမှု ၁၃၂ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
7. W.A.C Bennett ဆညျ၊ ကနဒေါ - ရသေိုလှောငျမှု ၇၄ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
8. Krasnoyarsk ဆညျ၊ ရုရှား - ရသေိုလှောငျမှု ၇၃ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ 9. Zeya ဆညျ၊ ရုရှား - ရသေိုလှောငျမှု ၆၈ ဒသမ ၄၂ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
10. Robert-Bourassa ဆညျ၊ ကနဒေါ - ရသေိုလှောငျမှု ၆၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
Ref: Most of the world's 58,700 biggest dams are crumbling and could release enough water to fill the Grand Canyon TWICE if they collapse, report warns (dailymail)
ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံးဆည်ကြီးပေါင်း ၅၈,၇၀၀ အနက် အများစုမှာ ယိုယွင်းပျက်စီးလာနေပြီး ဆည်ကျိုးမည်ဆိုပါက ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံး ချောက်ကြီးဖြစ်သော Grand Canyon ကို ၂ ကြိမ်ခန့်အထိ ရေအပြည့်ဖြည့်ပေးနိုင်မည့်ပမာဏဖြစ်ကြောင်း သတိပေး
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အရီဇိုးနားပြည်နယ်ရှိ ဟူးဗားဆည် (Hoover Dam) မှသည် ဂျော်ဂျီယာရှိ အင်ဂူးရီဆည် (Inguri Dam) အထိသော ကမ္ဘာ့အကျော်ကြားဆုံး ဆည်ကြီးများ၏ အများစုမှာ ပြိုကျပျက်စီးတော့မည့် အန္တရာယ်ရှိနေကြောင်း အစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင် သတိပေးထားသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ အကြီးမားဆုံးဆည်ကြီးပေါင်း ၅၈,၇၀၀ အနက် အများစုမှာ ၁၉၃၀ မှ ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်ကာလများအကြား တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာ သက်တမ်းအားဖြင့် နှစ်ပေါင်း ၅၀ မှ ၇၀ ကြားရှိနေပြီဖြစ်သည်။
အများစုမှာ နှစ် ၅၀ မှ ၁၀၀ ကြား သက်တမ်းခံနိုင်စေရန်သာ တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ရာ ယခုအခါ ၎င်းတို့သည် သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မည်အချိန် ချဉ်းကပ်လာပြီ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ဆည်ကြီးများသာ ကျိုးကျမည်ဆိုပါက ရေ ၈,၃၀၀ ကုဗကီလိုမီတာ ထုတ်လွှတ်မည်ဖြစ်ရာ အမေရိကန်ရှိ ကမ္ဘာကျော် Grand Canyon ချောက်ကြီးကို ၂ ကြိမ်ခန့် ရေဖြည့်ပေးနိုင်မည့် ပမာဏလည်း ဖြစ်သည်။
(Grand Canyon ချောက်ကြီးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ အရီဇိုးနားပြည်နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ အလျား ၂၇၇ မိုင်၊ အနံ ပျှမ်းမျှ ၁၀ မိုင်နှင့် အနက် ပျှမ်းမျှ ၁ မိုင်ရှိသည့် ချောက်ကြီးဖြစ်ကာ ချောက်အောက်ခြေတွင် ကော်လိုရာဒိုမြစ်က စီးဆင်းနေသည်။)
ယခုတွေ့ရှိချက်သည် နိုင်ငံတကာမှ မူဝါဒချမှတ်သူများအနေဖြင့် အိုမင်းလာသော ဆည်များကို မည်သို့လုပ်ဆောင်မည်အား ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် အထောက်အကူပြုမည်ဟု သုတေသီတို့က မျှော်လင့်သည်။
ယခုလေ့လာမှုကို ကုလသမဂ္ဂ ရေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကျန်းမာရေး တက္ကသိုလ်အင်စတီကျု (UNU-INWEH) မှ သုတေသနပညာရှင်များက ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတဝန်းရှိ အကြီးမားဆုံး ဆည်ကြီးများ၏ သက်တမ်းနှင့် အခြေအနေများကို လေ့လာခဲ့ကြသည်။
သက်တမ်း နှစ် ၅၀ မှ ၁၀၀ ကြား ခံနိုင်ရည်ရှိအောင်သာ ဒီဇိုင်းထုတ်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ရာ ယခုအခါ သက်တမ်းအိုမင်းလာမှု လက္ခဏာများ စတင်ပြသလာဖွယ်ရှိနေကြောင်း သုတေသီတို့က ပြောသည်။
UNU-INWEH မှ အကြီးတန်း သုတေသနပညာရှင် ၊ ယခုလေ့လာမှုကို ဦးဆောင်သူ ဒူမင်ဒါ ပရဲရား (Duminda Perera) က “သက်တမ်းရင့်လာတဲ့ ဆည်တွေရဲ့ ယနေ့ပြဿနာဟာ နိုင်ငံအနည်းငယ်သာ ရင်ဆိုင်နေကြရတာလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကြီးမားဆုံး ဆည်ကြီးတွေရဲ့ ၉၃ ရာခိုင်နှုန်းဟာ နိုင်ငံ ၂၅ နိုင်ငံမှာပဲ ရှိတာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။
“၂၀ ရာစုအလယ်ပိုင်းမှာ ကြီးမားတဲ့ဆည်ကြီးတွေဆောက်လုပ်မှု မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၀၊ ၇၀ ပြည့်လွန်ကာလတွေမှာ အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်က အာရှ၊ ဥရောပနဲ့ မြောက်အမေရိကတိုက်တွေမှာပါ။ အာဖရိကမှာ ဆည်ဆောက်လုပ်မှု အထွတ်အထိပ် ရောက်ခဲ့တဲ့ ကာလကတော့ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်ကာလတွေ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပရဲရားက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ကာလနောက်ပိုင်းတွင် ဆည်အသစ်ဆောက်လုပ်မှု ပမာဏ ဆက်တိုက်ကျဆင်းလာခဲ့သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ ဆည်များအတွင်း ရေကုဗ ကီလိုမီတာ ၇၀၀၀ မှ ၈၃၀၀ ကြား သိုလှောင်ထားသည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။
ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကလည်း ဆည်များအိုမင်းမှုဖြစ်စဉ်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်မှုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ၎င်းတို့အဖွဲ့က ယူဆသည်။
UNU-INWEH ၏ ဒါရိုက်တာ ဗလာဒီမီယာ စမက်ခ်တင် (Vladimir Smakhtin) က “ယခု အစီရင်ခံစာဟာ သက်တမ်းရင့် အိုမင်းနေတဲ့ ရေသိုလှောင်မှု အခြေခံအဆောက်အအုံတွေရဲ့ တစထက်တစ ဆိုးရွားလာနေတဲ့ ပြဿနာကို တစ်ကမ္ဘာလုံး အာရုံစိုက်မိစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ရေဘေးအန္တရာယ်ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့အပေါ် နိုင်ငံတကာက ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
1. Kariba ဆည်၊ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံ - ရေသိုလှောင်မှု ၁၈၅ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
2. Bratsk ဆည်၊ ရုရှား - ရေသိုလှောင်မှု ၁၆၉ ဒသမ ၂၇ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
3. Akosombo ဆည်၊ ဂါနာ - ရေသိုလှောင်မှု ၁၄၄ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
4. Daniel Johnson ဆည်၊ ကနေဒါ - ရေသိုလှောင်မှု ၁၃၉ ဒသမ ၈ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
5. Guri ဆည်၊ ဗင်နီဇွဲလား - ရေသိုလှောင်မှု ၁၃၅ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
6. Aswan High ဆည်၊ အီဂျစ် - ရေသိုလှောင်မှု ၁၃၂ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
7. W.A.C Bennett ဆည်၊ ကနေဒါ - ရေသိုလှောင်မှု ၇၄ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
8. Krasnoyarsk ဆည်၊ ရုရှား - ရေသိုလှောင်မှု ၇၃ ဒသမ ၃ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ 9. Zeya ဆည်၊ ရုရှား - ရေသိုလှောင်မှု ၆၈ ဒသမ ၄၂ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
10. Robert-Bourassa ဆည်၊ ကနေဒါ - ရေသိုလှောင်မှု ၆၁ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ ကုဗမီတာ
ပအေကယျြ (19x56) မီနီကှနျဒို၊ (ဘဏျအရဈကရြ)